ललितपुरमा एक सातामै जडीबुटी र लागुऔषधको कारोबार गर्ने ५ जना पक्राउ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ललितपुरमा एक सातामै जडीबुटी र लागुऔषधको कारोबार गर्ने ५ जना पक्राउ
ललितपुर । ललितपुरमा एक सातामै जडीबुटी र लागुऔषधको कारोबार गर्ने ५ जना पक्राउ परेका छन्।
महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले यो साता मात्रै लागुऔषध कारोबार गर्ने तीन जना र अवैध जडीबुटीसहित दुई जना गरी पाँच जना पक्राउ परेका हुन्।
महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले पक्राउ परेका पाँचै जनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए।
उनका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गरेर पक्रिएका हौँ, थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जडीबुटी कारोबारको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा मुद्दा पठाएको छ।
प्रहरीले गत २० गते दिउँसो धोबिघाट बस्दै आएका सोम गोले, बानेश्वर बस्ने अन्दीप महर्जन, कालोपुल बस्ने सुदीप बस्नेतलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले बताए।
प्रहरीले उनीहरुबाट लागुऔषध पनि बरामद गरेको छ । बरामद भएको लागुऔषधमा फेनारगन एम्पल २३६, डाइजापाम एम्पल १८७, नुर्फिन १७७ थान रहेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध शाखा जावलाखेलको टोलीले पाँचऔँले दुई किलोग्रामसहित ललितपुर महानगरपालिका–९ बालकुमारीबाट जुम्ला सिंजा गाउँपालिका घर भएका कोटेश्वर बस्दै आएका दिलबहादुर बुढा र यार्सागुम्बा पाँच सय ग्रामसहित धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका–१ घर भएका बूढानीलकण्ठ–१० बस्ने पूर्णकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।